Homeसमाचारह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ? हे’र्नुहोस्
April 22, 2021 admin समाचार 2778
बुधबार प्रति तोला ९२ हजार रु’पैयाँले कारोबार भएको सुनको मूल्यमा बिहिबार थप २०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महा’संघका अनुसार बिहिबार छापा वाला सुन प्रति तोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने, तेजा’बी सुनको मूल्य ९१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यता चाँदीको मूल्यमा पनि बुधबारको मूल्य थप २५ रुपैयाँले वृद्धि हुँदै बि’हिबार प्रति तोला एक हजार ३३५ रुपैंयामा कारोबार भएको छ ।
प्रधा’नमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले देशभर नयाँ पार्टी खोलेर हिँडेको आरो’प लगाएका छन् । उनले नेपाल समूहले पार्टीमा उपद्रो गर्दै आएपनि भरसक अहिले पनि आफूहरु सम्झाउने प्रया’समा रहेको बताए ।
हाम्राविरु’द्ध कति गरे ? तर अहिले उनीहरुले यति उपद्रो गर्दा पनि, अर्को पार्टी देशभर खोलेर हिँड्दा पनि, अहिलेसम्म हामीले कारबाही नगरेर सम्झाइबुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा ए’माले केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, ‘अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनीमा छ, सच्याउ’नेमा छ । अहिले पनि भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने छ । ’
नेपाल कम्यु’निस्ट पार्टी (एमाले) को पार्टी कार्यालय शिलान्यास गरिएको छ । यसअघि एमाले मुख्या_लय रहेको बल्खुमा नयाँ र अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पार्टी कार्यालयको शिल’न्यास गरे ।
२०७२ सालको भूक’म्पले पार्टी कार्यालय भत्काएपछि एमालेले नयाँ भवन बनाउन लागेको हो । बल्खुको भवन भत्कि’एपछि एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराही भाडाको घरमा सरेको थियो । त्यहाँबाट पनि तत्कालका लागि पार्टी कार्यालय थापा’थलीमा सार्न लागिएको छ । सो कार्यालयको ओलीले नै आज उद्घा’टन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । रातोपाटीबाट
May 27, 2021 admin समाचार 3191
October 11, 2020 admin समाचार 9117
October 7, 2020 admin समाचार 8418